အကောင်းဆုံးပုံတူ Store က - သာယနေ့ - သတိပေးချက် ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း (-55%)
အကောင်းဆုံးပုံတူ Store က
ငါတို့ရှိသမျှသည်ပေး - သူတို့ကိုဝတ်ထားသည်လူများ၏မြင့် class နဲ့ကြော့ရှင်း၏
အဝတ်များနှင့်ဖိနပ်အဝတ်အစား, ရတနာနှင့်နာရီတဖဲ့ကျနော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်အရာအားဖြင့်ငါတို့သည်စတိုင်နဲ့ကြော့ရှင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဖော်ပြကြောင်း, အလှဆင်ရုံအချို့သောဒြပ်စင်များမဟုတ်ကြသာဖြစ်ကြသည်။ အမြားအပွားလူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင်ဤဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားလူမှုရေးအဆင့်အတန်းဒါမှမဟုတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာနှင့်လှပသောနှင့်အရသာကောင်းတစ်ခုအသိနှင့်အတူ, ဖက်ရှင်ဝတ်စားဆင်ယင်တဲ့သူကသူတို့ကိုဝတ်ဆင်သောသူ၏ရိုးရှင်းစွာခိုင်ခံ့ Self-အသိပညာပေးတဲ့သက်သေဖြစ်ကြ၏။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကျနော်တို့အမြဲတမ်းထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်တိုက်ရိုက်အဝတ်, အိတ်, မျက်မှန်သို့မဟုတ်ပိုက်ဆံအိတ်မဝယ်မတတ်နိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောဖြေရှင်းချက်ထိုသူအပေါင်းတို့နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော, အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးပစ္စည်းများထဲကလုပ်နေကြတယ်စသည်တို့ကိုမျက်မှန်ကြီးပုံတူ, ဖိနပ်, နာရီ, ကပေးတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေ၏အားသာချက်ယူရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကြွင်းသောအရာအထက်ဖြောင့်ထုတ်လုပ်သူများထံမှ၎င်းတို့၏မူလ counterparts တွေကိုကနေသူတို့သာအနည်းငယ်မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်သူတို့ထဲကအများစုဟာတကယ်တော့မူရင်းသူတွေကိုကှာခွားရန်ခက်ခဲကြသည်။ အိတ်, မျက်မှန်နှင့်ပိုက်ဆံအိတ်ကြီးပုံတူ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုးဆိုင်၌သင်တို့ကိုအဝတ်နှင့်ဖိနပ်ကြီးပုံတူ, ထိုကဲ့သို့သောနာရီနှင့်ရတနာအဖြစ်အလှဆင်အဖြစ်မင်းသမီး '' ဖက်ရှင်တွေရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သော Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani နှင့် Moschino အဖြစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကြီးပုံတူကိုပေး။ ကျနော်တို့က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အသေးစိတ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုသိမှရရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်နှစ်ခု functions များ, သိပ်နေရောင်ကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အပိုဆောင်းအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုဝတ်ပြုကြလော့။ အဲဒါတွေကဘာလဲ? သင်တန်း၏နေကာမျက်မှန်။ ဂန္ထဝင်, နေကာမျက်မှန်များရိုးရာမော်ဒယ်များတစ်လမ်းအတွက်တစ်ခေတ်ဆန်းမှတဆင့်သွားကြသည်။ တစ်ခုအထူးကြွယ်ဝသောကမ်းလှမ်းမှုရှိကြောင်းနေကာမျက်မှန်ငှာနဲ့စတိုးဆိုင်သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ကောင်းစွာသိကြကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်လေးစားဖွယ်ဒီဇိုင်နာများကြီးပုံတူ get နိုင်သည်ကျွန်တော်တစ်ဦးအနိမ့်သောစျေးနှုန်း, ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဆွဲဆောင်မှုရွေးချယ်မှုအာမခံပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုတစ်ဦးက Chrome နှလုံးအနောက်နိုင်ငံတွေအတွက်အလွန်လူကြိုက်များပုံတူ, အဖြစ် Cartier, Bylgari, Versace, Ray ဘန်ကီမွန်းကနှင့်, သင်တန်း, Dior နှင့် Glassino ကဲ့သို့အခြားကောင်းစွာသိကြကုန်အမှတ်တံဆိပ်, ရှိပါတယ်။ အားလုံးထုတ်ကုန်ဂရုတစိုက်ဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်အမျိုးမျိုးသောမော်ဒယ်များရာပေါင်းများစွာကနေရှေးခယျြထားနဲ့ရှေးခယျြနေကြသည်။ သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုကြောင့်ကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ကြောင်းသာထုတ်ကုန်ပူဇော်ပုံကိုဖွင့်, check လုပ်ထားနှင့်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းနေကာမျက်မှန်ပုံတူ DITA, Miu Miu သို့မဟုတ်ရောဘတ် Cavall မြင့်မားသောပစ္စည်း၏အရည်အသွေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှု၏တစ်ဦးအာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြည့်အဝကမ်းလှမ်းမှုကိုစတိုးဆိုင်က်ဘ်ဆိုက် https://get2lux.cn/en/123-glasses အပေါ်တိုက်ရိုက်ရရှိနိုင်ပါသည် အပေါ်တိုက်ရိုက်ရရှိနိုင်ပါသည်
စတိုးဆိုင်စင်ပေါ်အပေါ်ထက်ဒါမှမဟုတ်အရာရှိတဦးကစတိုးဆိုင်မှာအများကြီးနိမ့်တဲ့စျေးနှုန်းမှာတစ်ဦးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ပါသလား? သင်နောက်ဆုံးရစျေးကွက်အပေါ်လက်ကိုင်အိတ်များနှင့်အရာထိုကဲ့သို့သော Chloe, Louis Vuitton သို့မဟုတ် Gucci အဖြစ်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဒီဇိုင်နာများမှလာသောတူညီထုတ်ကုန်, မဝယ်နိုင်ပါသလား? လျှင်အစားမူလတဦးတည်း၏သင်တန်းကိုသင်, သင်က၎င်း၏ Non-မူရင်း source ကိုရှိနေသော်လည်းသေချာပေါက်လျော့နည်းတန်ဖိုးနှင့်လျော့နည်းအရည်အသွေးကိုမဆိုလိုပါသော, တစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်ပုံတူနှင့်အတူကျေနပ်မှုရှိပါသလဲနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ပို. ပို. နာမည်ကြီးတွေနဲ့ကမ္ဘာ့အဆင့်မီကြယ်ပွသူတို့လူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဒီဇိုင်နာများ၏အိတ်ကိုမိတ္တူပွားထဲကိုအသုံးဝန်ခံသည်။ တောင်မှပိုလန်အတွက်ရုပ်သံဖန်သားပြင်ကနေအများအပြားနာမည်ကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ဗီရို Prada အိတ်ကို၏တစ်ဦးထက်ပိုပုံတူမိုက်ကယ် Kors, Miu Miu သို့မဟုတ် Valentino လက်ကိုင်အိတ်များဖုံးကွယ်ထားကြပါဘူး။ ဒီဒီနေ့ခေတ်တစ်ဘုံနှင့်အသိသာလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းကအဘယ်ကြောင့်လမ်းပေါ်မှာအတွက်ပျမ်းမျှအားလူအားလျှောက်ထားမဟုတ်သင့်သလဲ ပိုက်ဆံအိတ်ကြီးပုံတူနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်ကျော်ကြားထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်မိတ္တူပွားထဲများ၏ကြီးထွားလာဝယ်လိုအားမှအဖြေဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးအများကြီးစျေးနှုန်းတွေအောက်ပိုင်းနှင့်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှု။ ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်နာများအနေဖြင့်ကုန်စည်ကျယ်ရွေးချယ်ရေးပူဇော်နှင့်ကျွန်တော် 100% ကျေနပ်မှုအာမခံပါသည်။ ရိုးရှင်းသောပုံစံများ, ဂန္ဖြတ်တောက်မှု, နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဒီဇိုင်းနှင့်အလှဆင် - ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဒီဇိုင်နာများနှင့်ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်ထံမှပိုက်ဆံအိတ်မသာထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးမြင့်မား, ဒါပေမယ့်လည်းထူးခြားတဲ့, မမှားမယွင်းကြည့်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ အများအားဖြင့်သူတို့အကူအညီနဲ့တစ် Celine, Gucci, လူးဝစ် Vuitoon သို့မဟုတ် Burberry ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ဦးပုံတူအားဖြင့်ပူဇော်သောအခါရဲ့ပုံမှန်ဝင်ရိုးစွန်း၏အိတ်ကပ်မရရှိနိုင်ကြသည်။ သူအပေါငျးတို့အမှတ်တံဆိပ်, နှင့်အခြားသော, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ store မှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ပိုက်ဆံအိတ်မိတ္တူပွားထဲမူရင်းထံမှကုန်ပစ္စည်း၏အရည်အသွေးဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းများအတွက်ကွဲပြားကြဘူး: သူတို့အတူတူသို့မဟုတ်အလားတူပစ္စည်းများ အသုံးပြု. ဖန်တီးနေကြသည်, ထိုထူးခြားသောအမြင်ဒီဇိုင်းကိုထိန်းသိမ်းနေစဉ်။ ကြောင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်တိုင်းပုံတူမူရင်းကနေချွတ်စွပ်အရွယ်အစားသည်နှင့် chic, စတိုင်နဲ့ကြော့ရှင်းတန်ဖိုးထားတတ်သောသူအပေါင်းတို့အဘို့စုံလင်သည်။ အထူးခရစ်ယာန် Louboutin ပုံတူဧကန်အမှန်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်တဲ့တစ်အတွေးထွက်ဘို့ကြီးသောနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသင်သည်နှစ်ခုစလုံးယောက်ျားမိန်းမတို့ကို၎င်း, အပြည့်အဝကမ်းလှမ်းမှုကိုများအတွက်ပိုက်ဆံအိတ်အောက်ပါလိပ်စာ https://get2lux.cn/en/120-wallets အောက်မှာစတိုးဆိုင် website တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်တှေ့လိမျ့မညျ အောက်မှာစတိုးဆိုင် website တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်တှေ့လိမျ့မညျ
ဖိနပ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်တစ်ဦးကိုနေ့စဉ်ဗီရို၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါကြေညာချက်တွင်အချို့သောအမှန်တရားရှိပါသည်။ ဒါဟာမင်းသမီးဟာသူတို့ရဲ့ဗီရိုထဲမှာဖိနပ်၏အကြီးဆုံးစုဆောင်းခြင်းရှိသည်ဖို့သာသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးပေမယ့်လည်းသူတို့ကအများကြီး, အဆင်ပြေဖက်ရှင်နှင့်ကြော့မော်ဒယ်များအကြားရွေးချယ်ဖို့နိုင်တော့မည်ချင်ကြောင်း, မည်သူမဆိုရှော့ခ်သင့်ပါဘူး။ သူတို့ဖက်ရှင်ဖိနပ်၏ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ဦး undying ဂုဏ်သတင်းကိုသူထုတ်လုပ်သူများထံမှလာလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန် Louboutin, Gucci, စကားစမြည် Coca & Cola, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Yeezy နှင့် Prada: နှင့်ကဲ့သို့သောကမ္ဘာတလွှားလူသိများတဲ့ကုမ္ပဏီများ, အခြားသူတွေအကြား, ရှိပါတယ်။ အမှန်မှာထိုဖိနပ်ထိုကဲ့သို့သောဖိနပ်များ၏အရည်အသွေး, လက်ရာ, ကြာရှည်ခံမှု, ကြော့နှင့်နှစ်သိမ့်နေဆဲအလွန်အဆင့်မြင့်ပေါ်မှာရပ်နေချိန်တွင်အလွယ်တကူစျေးကွက်အပေါ်မှာအများကြီးသေးငယ်နှင့်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုစျေးနှုန်းများတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်သောသူတို့ကိုထုတ်လုပ်သူများထံမှ replicas ။ Gucci ရဲ့ဖိနပ်တစ်ဦးကပုံတူ, LV သို့မဟုတ် Prada ဖိနပ်လူကြိုက်များဖိနပ်၏ဂန္ဒီဇိုင်းများတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာယင်း၏အပိုင်နှင့်ဆက်စပ်သောကြီးမားဂုဏ်သိက္ခာသတိထား၌နေသောသူအပေါင်းတို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဖောက်သည်များ၏ကြီးထွားလာလိုအပ်ချက်ဖို့တုန့်ပြန်ကြသည်။ ကျနော်တို့က်ဘ်ဆိုက်မှာဖိနပ်မိတ္တူပွားထဲဝယ်ယူရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်
အမြားအပွားလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်တံဆိပ်သို့မဟုတ်အဝတ်အစားပေါ်မှာလူသိကမ္ဘာကြီးထုတ်လုပ်သူများမြင်နိုင်သောသင်္ကေတပေါ်ပြလိုဂိုဇိမ်ခံ, စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာ၏တိုက်ရိုက်နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့တစ်ကြော့နှင့်သီးသန့်အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ဖို့သို့မဟုတ်သူ၏မော်ဒယ်အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ကြယ်ပွဝတ်ဆင်ထားပြီးတစ်စားဆင်ယင်ဝတ်ဆင်ရန်złotysပင်ထောင်ပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာသုံးစွဲသို့မဟုတ်အစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးပါပဲ။ သူများသည်ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ရိုးရိုးမူရင်းဖြတ်တောက်မှု, ဒီဇိုင်းများနှင့်စတိုင်များပုံနဲ့တူတဲ့အဘယ်သူမျှမလိုက်သောလမ်း, တာရှည်ခံခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများနှင့်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အဝတ်ကိုမိတ္တူပွားထဲအတူအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ဘူးသောမိတ္တူပွားထဲများထဲတွင်ထိပ်ပေါ်မှာအမှတ်တံဆိပ်နေသောခေါင်းစဉ်: Gucci, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Louis Vuitton နှင့် Casadei ။ ဒါဟာအစမှတျသားဖှယျကြော့အဝတ်အစားများ၏အစိတ်အပိုင်း, Chanel, Emporio Armani, Hermes နှင့် Givenchy ၏ဆိုလိုသည်မှာမိတ္တူပွားထဲအတွက်ဖက်ရှင်စျေးကွက်၏အချို့သောအသစ်များရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဖြစ်ကြောင်း, ဖော်ပြရကျိုးနပ်သည်။ အဝတ်မိတ္တူပွားထဲမြို့ပြ Salon နှင့်စီးပွားရေးအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ်အရာ, ကြော့နဲ့ဇိမ်ခံအရွယ်အစားကိုက်ညီတာရှည်ခံသည့်ငွေစုနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်၏စည်းစိမ်ကိုတန်ဖိုးထား, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုဖြစ်ကြောင်းအဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်လိုသူလူတို့အဘို့တစ်ခုစံပြဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကြ၏ client နှင့်ကန်ထရိုက်တာများနှင့်အတူအစည်းအဝေးများ။ သငျသညျဝက်ဘ်ဆိုက် https://get2lux.cn/en/115-clothing အပေါ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက် အပေါ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်
လူတိုင်းသိရွှေသို့မဟုတ်ငွေအတောက်ပလည်ပင်း, နားရွက်, လက်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာတဝှမ်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့လက်ကောက်ကိုအလှဆင်သောအရာ, ဒါမှမဟုတ်, ရတနာ, လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအဝတ်အစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်ဦးကျွန်မတို့ဟာခွဲလို့မရတဲ့ဒြပ်စင်ဖြစ်လာကြပါပြီ။ ခေတ်သစ်ကာလ၌, မဟာဖြစ်ရပ်ဆန်းများထဲမှလူသိများသည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်လာမယ့်, အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းကွင်းခတ်အနေဖြင့်ရတနာမိတ္တူပွားထဲဖြစ်ပြီး Tiffany & Co. , Chanel နှင့် Bvlgari ၏အထူးသဖြင့်မိတ္တူပွားထဲအတွက်ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။ သူတို့အားအမှတ်တံဆိပ်များ၏တုပဝတ်ဆင်ကမ္ဘာတဝှမ်းဘုံဖြစ်လာပြီ, ကမရှိတော့အငြင်းပွားဖွယ်ရာတစ်ဘာသာရပ်ရဲ့အများနှင့်ဧကန်အမှန်မဟုတ်အရှက်၏။ replica ဘုံကလူ, ဒါပေမယ့်လည်းကမ္ဘာကြီးကြယ်မင်းသမီးနှင့်အဆိုတော်များကသာအသုံးပြုကြသည်။ ပို. ပို. မကြာခဏ mens '' ရတနာကြီးပုံတူကြောင့်မကြာခဏတစ်မူထူးခြားတဲ့သို့မဟုတ်မူရင်းကွင်းဆက်သို့မဟုတ်တံဆိပ်ဝတ်ဆင်ရန်တစ်ခုတည်းသောအခွင့်အလမ်းဖွင့်တော်မူသောအဘို့, လူကြီးလူကောင်း, အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးသမားများကရွေးချယ်နေကြတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော Dior, Piaget သို့မဟုတ် Louis Vuitton အဖြစ်တံဆိပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဝတ်ရတနာမိတ္တူပွားထဲစတိုးဆိုင်ကြည့်ယူပြီးတဲ့အခါမှာ, သင်အမျိုးမျိုးသောပုတီး, ထိုမှပါး, လည်ဆွဲ, ကွင်းများနှင့်အရာခပ်သိမ်း၏အကြီးမားရွေးချယ်ရေးရှာတှေ့နိုငျတိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးလိုအပ်နေပါသည်။ ကျနော်တို့အချိန်ကျမ်းပိုဒ်တိုင်းတာခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုးဆိုင်ရှေးဟောင်းခေတ်ကတည်းကလူသိများပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တွေ့မြင်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့လက်ရှိပုံစံအတွက်နာရီပဲရာစုနှစ်နှစ်ခုအကြာတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ လောလောဆယ်သူတို့မသာတဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာ, ဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုအဘို့ကြီးစွာသောစိတ်ကူး။ ဒီဆုကြေးဇူးကိုဒေါ်လာတောင်မှထောင်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိမူရင်းတစ် Rolex နာရီပုံတူဖြစ်တယ်, မဟုတ်ရင်တောင်။ တစ်ဦးပုံတူကိုဝယ်ခြင်းငှါဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ, သင်ကထုတ်လုပ်သူကနေဖြောင့်လာမယ့်ထုတ်ကုန်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ဂရုတစိုက်ထုတ်လုပ်အတုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိဖို့လိုတယ်။ ကြောင်းနေသော်လည်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုအတွက်လက်ပတ်နာရီကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှ Emporio Armani ရဲ့ပုံတူလက်တွေ့ကျကျတိုင်းအသေးစိတ်အတွက်ပုံနဲ့တူတဲ့, တတ်နိုင်သမျှမူရင်းအဖြစ်အနီးကပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Cartier, Hublot, ဦး-လှေ, TAG Heuer, BREITLING နှင့်ပင် Rachard Mille: တူညီသောသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်မှန်သည်။ လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ဖက်ရှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကမ်းလှမ်းမိတ္တူပွားထဲ check လုပ်ထားကြသည် Watch ။ သူတို့ကိုဝတ်ထားကြော့နှင့်စတိုင်ကိုဆိုလိုသည်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ခုဝယ်ယူပြီးခဲ့သည့်ရာခိုင်နှုန်းဖို့ဖောက်သည် '' အိတ်ကပ်တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်မထားဘူး။ စတိုးဆိုင်များတွင်ရရှိနိုင်နာရီမော်ဒယ်များများ၏အသေးစိတ်ကမ်းလှမ်းမှုကို သိ. စိတ်ဝင်စားပုဂ္ဂိုလ်များ https://get2lux.cn/en/127-watches မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်နေကြသည် မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်